Sida loo sameeyo iPhoto Muqaal ah in Play on TV Apple
Waxaad rabtaa inaad arooska / guuradii ama carruurnimada ama dhalashada ee carruurtaada xusuustay adigoo slideshow ah sawirrada. Waa in aad ka dhigi kartaa dareenka nostalgic marka ay waqti xun u maqan maalmood ee la soo dhaafay aad, ama waxay noqon kartaa celceliska kale ku riyaaqayaa qoyska. iPhoto waa mid aad u badan in ay la tacaalaan samaynta slideshow ka sahlan. Software waxa uu yimid iyadoo qaar ka mid ah mawduucyada pre-rakibay loogu duubey, oo waxaad iyaga ku dari kartaa sawiro in ay slideshow u diyaariyeen. Halkan waa tutorial slideshow iPhoto ah in uu ku tuso sida loo sameeyo slideshow iPhoto ah, iyo ciyaaro ay ka mid yihiin in aad TV Apple ee faahfaahin ah TV.
Qeybta 1: Sida loo sameeyo duubey la iPhoto
Qeybta 2: Sida loo Daawo Muqaal iPhoto on TV Apple
iPhoto '11 ka dhigaysa waa u fududahay in ay sameeyaan show slide ah. Just dooro photos in aad rabto in aad ka mid ah in slideshow ah, iyo dooran New Muqaal ka File menu. Waxaad markaa magac ku qor laga yaabaa slideshow cusub abuuray iyagoo hoos yaala qaybta Muqaal.
Sida iPhoto ka mid ah mawaadiicda qaar ka mid ah si aad u dhigi slideshow in Hababka pre-design, riix badhanka Dulucda xitaa mawduucyada slideshow in a daaqadaha cusub oo dooro mid ka mid ah uu jecel yahay. Riix badhanka Dooro si aad u dalbato. Waxaad jiidi karaan jeedi photos on top inay dib-u-diyaarin sawirada. Oo sidaas waa inaad samayn.
Calan u ah Custom iPhoto Muqaal
Laga soo bilaabo waxa lagaga wada hadlay kor ku xusan, waxaad ka heli kartaa slideshow isticmaalaya mawduucyada default tilmaamay ee iPhoto u slideshow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dheer ee guryaha music iyo Settings ayaa laga wada hadlaa guud ee tilmaamo dheeraad ah.
Talaabada 1: aad habayso Photo
Dooro slideshow cusub ka guddi isha. Waxaad ka heli kartaa sawiro ee slideshow ee strip filim ee qaybta sare ee daaqadda. Waxa aad maamuli kartaa amarka ama isku xigxiga ee slide xaqa oo kaliya waxayna jiidayeen images doorbidayso by thumbnails ka si sawir ku strip filimka ka. Ka dib markii la beddelo amarka ka mid ah sawir, waxaa isku shaandheyn doono Eeboo ah.
Talaabada 2: Dooro iyo dar Music Files
Waxaad ka heli kartaa bar goobaha Music si ay u maareeyaan files audio u slideshow adigoo riixaya badhanka Music ee qaybta hoose ee midigta ah uu furmo. Waxaad u baahan tahay in ay doortaan daadiyaa files ka menu isha si aad u hesho files music ee drive in aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan. Waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah Gurtida dhisay-in u slideshow, ama aad kala dooran kartaa maktabadda ee Lugood ka aad jeceshahay Mac.
Talaabada 3: Dooro Custom Duration ah
Waxaad u baahan tahay inaad doorato badhanka Settings, oo aad u kala duwan yihiin qaar ka mid ah ka dhigi kartaa halkan doorashada kaliya music. Waxaad astaysto duration ee sawirka slideshow ah in loo soo bandhigo, ama aad u soo ururin karaan sawiro aad dhererka wadada audio gal marka aad oggolaan doontaa in faylka maqal ah in la ciyaaray ee asalka slideshow ah.
Talaabada 4: qabsiga u Length Track ah
Waxaad ka heli kartaa hoos u soo dejiyey menu u kala guurka adigoo gujinaya box kala guurka. Guurka default ayaa lagu wadaa in uu hab "wuxuu kala diri karaa". Laakiin waxaad dooran kartaa kala guurka dheeraad ah oo ka soo kala doorashada. The "libdhi Iyada Black" guurka waa badan wax ku ool ah u slideshow. Waxa aad maamuli kartaa ama qabsato sifooyinka ay ka ka menu hadal previewed.
Talaabada 5: Dooro Title ah Muqaal ah
Laga soo bilaabo guddi goob slideshow ah, waxaad ka heli kartaa maamulaha horyaalka ama magaca ikhtiyaarka ah oo dhan menu Slides ee dhammaan photos mar ama sawir kasta oo aad dooran kartaa menu Tani Slide sare ee guddiga. Kuwani waxay ku siin doonaa fursad ay ku doortaan goobta oo dhan oo sawiro ama mid ka mid ah loo doortay laakiin inta badan waxay idin tijaabiyo doonaa laylis ah ee doorashada kala guurka kala duwan sawiro kala duwan. Waxaad ku dari kartaa macluumaad dheeraad ah sida sharaxaada kale, taariikhda iyo horyaalka, iwm aad sawiro ku slideshow ah.
Talaabada 6: Samee Slide Title ah
Waa maxay slide horyaalka? Waxaad ku dari kartaa horyaalka ah in uu noqon doono kulanka xiisaha leh ee slideshow ah bilowga iyo aad ugu dhegsan oo leh sawirka ugu horeeya. Xilkaasi waxa uu horyaalka slide ee aan la beddeli karin, laakiin style font ee si fudud loo beddeli karin ka tilmaamaha soo socda.
Dooro menu Text ah.
Isticmaal Command + T in ay leeyihiin guddi noocyada in loo soo bandhigay.
Hadda bedeli noocyada Style ee Slide Title ah.
Tallaabo 7: yaree Muqaal Photos Your
Waxaa jira qaar ka mid ah bedeley kale hoose ee guddiga Settings. Habka ama nidaam aad u baahan tahay si ay u kala soocaan sawiro aad u la soo bandhigay in la hubiyaa karaa "Miisaanka Photos in xir Screen". Menu Tani waxay ka fogaadaan doonaa qataarrada madaw oo ka dhinac ee sawiradaada. Laakiin waxaad u baahan tahay in la xusuusto in doorashooyinkan waa ku tiirsan si ay u qalab aad u isticmaali doonto loo maqli slideshow ah.
Tallaabo 8: Dooro Size Screen Rabtid
Laga soo bilaabo Muqaal iPhoto ah, waxaad ka heli kartaa ratio 16:10 dhinaca dooran caadiga ah. Laakiin marka aad u ciyaaro si TV Widescreen ama monitor, waxaad u baahan tahay in la beddelo cabbirka Screen in ay 16 ratio dhinaca: 9 iyo in aad u baahan tahay inaad doorato tirada screen haboon tahay iPhone ama iPod Mini ama iPad u ciyaaro waxa ay ku.
An Easy Talo Waxaad for:
Size movie waxaa laga yaabaa in aan taam u noqon doono qalabka iyo waxa laga yaabaa in aan loo baahnayn oo waaweyn. Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay in ay doortaan cabbir sida uu qalab gaar ah. Waxaad u baahan tahay riix badhanka in dhoofinta ee laga heli karo hoose ee suuqa kala ah iPhoto ah. Halkan waxa aad maamuli kartaa cabbir ee filimka sida ay guryaha qalabka.
Tallaabooyinka kor ku xusan waxaad ka heli kartaa slideshow ah mid aad u fudud, si degdeg ah oo dhamaystiran u sawiro aad ku haboon qalab loo maqli ah. Hel ku lifaaqan tilmaamaha ku dar aqoonta ugu fiican ee aad fiiro-dheer si aad u hesho dhadhan wanaagsan ee ka slideshow ah.
Si aad u daawato iPhoto slideshow on TV Apple, si aad u Apple TV hagaagsan karaa slideshow iPhoto la Lugood. Si aad u dhoofiyaan slideshow in ay Lugood, marka hore dooro Dhoofinta ka File menu oo taga si Muqaal tab. Dooro AppleTV oo ugu dambeyntii riix badhanka dhoofinta inuu ku soo bilowdo abuurka.
Talo: Haddii aad dooratay ee " Si toos ah slideshow soo dir Lugood "doorasho, Muqaal laga dhoofiyey lagu dari doonaa Lugood, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan slideshow iPhoto in Apple TV for loo maqli karo.
Marka TV Apple ayaa si sax ah ugu xiran in aad Mac, aad ka heli karto hoos AALADAHA in Lugood. Waxaa Dooro oo taga si Movies tab si ay u gudbiyaan slideshow iPhoto in ATV. Eeg sida loo xidhi aad TV Apple by fiilooyinka .
Hadda aad heysato slideshow iPhoto ku qoran TV Apple, si fudud ayaad ka heli kartaa ka menu TV oo u ciyaaro sida soo jiidashada ah. Qaadashada TV Apple jiilka 2aad tusaale ahaan, waxaad u tagi kartaa "Kombiyuutaro" on your TV menu Apple, heli slideshow video iPhoto ee aad synced in Apple TV, waxay doortaan in ay ku ciyaaraan.
Fiiro gaar ah: Waxaad u abuuri karaa oo kaliya qaar ka mid ah sawir duubey fudud via iPhoto. Si aad u slideshow gaar ah la saamaynta cajiib ah, gaare xirfadle slideshow sida Wondershare Fantashow waa xulasho wanaagsan. Waxaa la iman mawduucyada il-qabad slideshow si aad u beddesho photos iyo Intro music filimada fantastik ah sida pro ah. Waa maxay dheeraad ah, waxaad si fudud u dhoofin karaan slideshow iyo ciyaaro TV Apple. Guide of Fantashow >>
Sida loo sameeyo Muqaal ah ka JPG iyo jpeg Images
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Muqaal iPhoto ah in Play on TV Apple